မိဘတွေ ဘာမှမသင်ပေးရဘဲနဲ့ You Tube ကြည့်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေကို ဖတ်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ မိုးမိုးရဲ့ သမီးလေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
သားသမီးတွေထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အခါ မိဘတွေရဲ့ဝမ်းသာပီတိဟာ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ။ ဒီနေ့မှာလည်း မိုးမိုးရဲ့သမီးအကြီးလေး ဆိုဂျူးဟာ ကလေးပီပီ You Tube က ကာတွန်းလေးတွေ ကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း ဒီကာတွန်းလေးတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ အချို့ကို အတန်အသင့် နားလည်နေခဲ့ပါပြီ။ ကလေးက ငယ်သေးတာမို့ မိဘတွေက စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ပေးတာတွေမလုပ်သေးပေမယ့် You Tube ကြည့်ပြီး တတ်နေ တဲ့ သမီးလေးကြောင့် မိဘနှစ်ပါးလုံးက ပျော်မဆုံးပါပဲ။
ဖေဖေနဲ့အရမ်းတူပြီး ဖေဖေ့ကိုလည်းသိပ်ချစ်တဲ့ ဂျူးငယ်လေးဟာ ဖေဖေ့လို အနုပညာဝါသနာပါမလား မေမေ့လို ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးလေး ဖြစ်မလားဆိုတာ ရင်ခုန်နေပါပြီ။ အသက် နှစ်နှစ်ကျော်လေးနဲ့ အရမ်းကိုဉာဏ်ကောင်းပြီး ထက်မြက်နေတဲ့ သမီးလေးဟာ အနာဂတ်မှာလည်း ထူးချွန်သူ လေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။
သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယိုလေးကို ” တစ်လုံးမှ မသင်ထားဘဲ Youtube ကနေပဲ self-study လုပ်ပြီး စာတွေရနေတဲ့ ဂျူးငယ်လေး အကုန်မေးလို့ ရတယ် အိုက်စင်မြင်မှ စားချင်လို့သာ ဂျီကျပြီး ဆက်မေးလို့မရတော့တာ သမီးလေးအသက်က ၂ နှစ်နဲ့ ၅ လရှိပါပြီ ” ဆိုပြီး ဖေဖေမိုးမိုးက ဝေမျှခဲ့ပါ တယ်။
တစ်လုံးမှ မသင်ထားဘဲYoutube ကနေပဲ self-study လုပ်ပြီးစာတွေရနေတဲ့ ဂျူးငယ်လေး ???အကုန်မေးလို့ရတယ်အိုက်စင်မြင်မှ စားချင်လို့သာဂျီကျပြီး ဆက်မေးလို့မရတော့တာ ??သမီးလေးအသက်က ၂ နှစ်နဲ့ ၅ လရှိပါပြီ??????????
Posted by Moe Sithu Kyaw on Monday, August 10, 2020
သားသမီးတွေထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အခါ မိဘတွေရဲ့ဝမ်းသာပီတိဟာ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ။ ဒီနေ့မှာလည်း မိုးမိုးရဲ့သမီးအကြီး လေး ဆိုဂျူးဟာ ကလေးပီပီ You Tube က ကာတွန်းလေးတွေ ကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း ဒီကာတွန်းလေးတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ အချို့ကို အတန်အသင့်နားလည်နေခဲ့ပါပြီ။ ကလေးက ငယ်သေးတာမို့ မိဘတွေက စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ပေး တာတွေမလုပ်သေးပေမယ့် You Tube ကြည့်ပြီး တတ်နေတဲ့ သမီးလေးကြောင့် မိဘနှစ်ပါးလုံးက ပျော်မဆုံးပါပဲ။
ဖေဖေနဲ့အရမ်းတူပြီး ဖေဖေ့ကိုလည်းသိပ်ချစ်တဲ့ ဂျူးငယ်လေးဟာ ဖေဖေ့လို အနုပညာဝါသနာပါမလား မေမေ့လို ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးဖြစ်မလားဆိုတာ ရင်ခုန်နေပါပြီ။ အသက် နှစ်နှစ်ကျော်လေးနဲ့ အရမ်းကိုဉာဏ်ကောင်းပြီး ထက်မြက် နေတဲ့ သမီးလေးဟာ အနာဂတ်မှာလည်း ထူးချွန်သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။
သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယိုလေးကို ” တစ်လုံးမှ မသင်ထားဘဲ Youtube ကနေပဲ self-study လုပ်ပြီး စာတွေရနေတဲ့ ဂျူးငယ်လေး အကုန်မေးလို့ရတယ် အိုက်စင်မြင်မှ စားချင်လို့သာ ဂျီကျပြီး ဆက်မေးလို့မရတော့တာ သမီးလေးအသက်က ၂ နှစ်နဲ့ ၅ လရှိပါပြီ ” ဆိုပြီး ဖေဖေမိုးမိုးက ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။